Obama oo aan ka qaybgali doonin aaska Maxamed Cali - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeObama oo aan ka qaybgali doonin aaska Maxamed Cali
June 8, 2016 Abdi Omar Bile Home, World 0
Washington-( Puntland Mirror )Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ka maqnaan doona aaska Jimcada dhacaya ee Maxamed Cali isagoo ka qaybgali doona xaflada qalinjabinta gabadhiisa.
Obama iyo Xaaskiisa Michelle ayaa Washington uga qaybgali doona xaflada qalinjabinta gabadhooda Malia, sida ay sheegtay afhayeen u hadashay Madaxweynaha.
La taliye sare oo katirsan aqalka Cad kaasoo loo yaqaan Cali ayaa u gudbiyay qoyska feeryahankii hore waraaq katimid Obama.
Bob Gunnell oo afhayeen u ah qoyska Maxamed Cali ayaa sheegay in Lonnie oo ah xaaskii uu ka geeriyooday Maxamed Cali in uu khadka taleefoonka kula hadlay Obama uuna uga tacsiyeeyay geerida kutimid qoyska.
Madaxweynaha Turkiga Rajib Dayib Erdogan iyo Boqor Cabdalaha Labaad ee dalka Urdun ayaa ka qaybgali doona munaasabada aaska taasoo si toos ah loo baahin doono.
Ku dhawaad 15,000 dad gaaraya ayaa ka qaybgali doona aaska oo ka dhacaya Freedom Hall, taasoo ay daba socoto socod lagu marayo wadooyinka magaalada Louisville oo uu ku dhashay feeryahankii hore.
Maxamed Cali ayaa Jimcadii dhoweyd ku geeriyooday magaalada Phoenix ee gobolka Arizona isagoo 74-sanno jir ah. Feeryahankii hore ee saddexda jeer ku guulaystay horyaalka feerka Caalamka ayaa la dhigay isbitaal asbuucii hore isagoo ka xanuunsanayay dhanka neefsashada, wuxuuna muddo 32 sanno ah qabay xanuunka laleemada.
June 4, 2016 Feeryahankii caanka ahaa Maxamed Cali oo geeriyooday
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha la doortay ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Khamiis ah kulan kula yeeshay gudaha magaalada Muqdisho safiiro ka socda beesha caalamka oo uu hoggaaminayo danjiraha Qaramada Midoobay u [...]